Filtrer les éléments par date : vendredi, 01 mai 2020
vendredi, 01 mai 2020 20:35
Tafika Malagasy: Sambo roa niara-nahetsika hanaramaso ny sisin-dranomasina avaratra andrefan’i Madagasikara
Niala ny takarivan’ity 1mey 2020 ity teto Mahajanga ny iraky ny Tafika Malagasy hanao fanaraha-maso ny sisin-dranomasina amin'iny faritra avaratra andrefan’i Madagasikara iny, hisoroka ny mety ho fidiran'olona an-tsokosoko noho ny fisian’ny valanaretina amin'ireo nosy rahavavy toy ny tazo mahery ao amin'ny nosy Comores.
Sambo roa no nahetsika ka ny iray hanao fisafoana sy faharaha-maso amin'ny tapany avaratra tonga any Analalava, ary ny faharoa miazo ny tapany atsimo any amin’ny Distrikan’i Soalala.
vendredi, 01 mai 2020 20:03
Covid-Organics: Madagascar fait don aux pays membres de la CEDEAO
Après la Guinée-Équatoriale, c'est au tour de la Guinée-Bissau d'affréter un avion spécial pour récupérer une cargaison de ce remède traditionnel amélioré trouvé par l'Institut Malgache des Recherches Appliquées (IMRA). Une initiative faisant suite aux échanges entre le Président Umaro Sissoco Embaló et le Président Andry Rajoelina.
Aussi, une délégation conduite par le Ministre de la Défense nationale de la Guinée-Bissau, le Général Sandji Fati était dans nos murs pour récupérer ces dons de l'État malagasy à la Guinée-Bissau, mais aussi aux 15 États membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Au total 118 cartons du Tambavy CVO, soit 5 250 doses curatives et 10 800 doses préventives, seront distribués aux hôpitaux de ces 15 pays.
vendredi, 01 mai 2020 19:57
Lozam-piarakodia RN4: Tale telo ao amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena niara-namoy ny ainy
Namoy Tompon'andraikitra telo ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arak'asa. Nodimandry vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nahazo azy ireo tao Andriba amin’ny lalam-pirenena faha4 ny Tale Jeneralin'ny ONCFP (Office National des Compétences et de la Formation Professionnelle) Ali Imrana, ny Talen’ny ONaPASCOMA (Office National de la Prévention des Accidents Scolaires de Madagascar) Rabe Severin ary ny Talen’ny CNAPMAD (Centre National de Production de Matériels Didactiques) Andrianjafimparany Ampy Anders.
Nitarika ny delegasiaonin'ny Ministera izy ireo, namita iraka tany Antsiranana tamin’ny fiatrehana sy fanaraha-maso ny fiverenan’ireo mpianatra manala fanadinana an-tsekoly. Efatra izy ireo no niaraka, ankoatra azy ireo ny filohan’ny FIMPI DIANA Thonyco. Maratra mafy ity farany, ary mbola tsaboina.
vendredi, 01 mai 2020 19:44
Mahajanga: Voamarina fa misy valanaretina Dengue
« Samia mitandrina fa voamarina fa misy valanaretina Dengue eto Mahajanga », hoy i Andriantomanga Mokhtar Salim, Ben’ny tanànan’i Mahajanga tao amin’ny pejiny facebook androany, sady nanentana ny mponina eto an-drenivohitry ny Faritra Boeny mba samy hanaraka ny toromarika fitandremana.
AEDES no anaran’ny moka mamindra ny Dengue.
vendredi, 01 mai 2020 19:30
1 mey « Fetin’ny Asa »: Miarahaba ireo mpiasa rehetra eto Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina
Nanao fanambarana tamin’ny tambazotran-tserasera sosialy facebook ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, « Miarahaba ireo mpiasa rehetra eto Madagasikara amin'izao andron'ny 01 may izao! » Niarahaba manokana ny risi-po sy fandavan-tenan'ireo mpitandro filaminana, ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'izao ady ataontsika amin'ny fiparitahan’ny Coronavirus izao ny tenany.
Eo anilan’ny mpiasa rehetra hatrany ny fitondram-panjakana, hoy izy, manohana ny toe-karena malagasy amin'izao fotoan-tsarotra diavina izao.
vendredi, 01 mai 2020 11:51
Covid-19: Avoty i Comores
Nosy isika, ary Comores ihany koa dia nosy maromaro. Mety hanao tia tena isika hoe ny antsika aza tsy tratra ka hijery ny hafa?
Aza adino fa 6ora mandeha vedety etsy Mahajanga, Maintirano, Soalala no misy ny Nosy Comores.
Firenena mahaleo tena ary manana mpitondra i Comores, tsy hitsabaka amin'ny fireneny isika, fa raha voa mafy Comores, dia azo antoka fa hiditra tsy ho tanantsika avy ao Mahajanga sy ny sisin-dranomasina andrefana io aretina io, ary dia hiditra mafy mihitsy.
vendredi, 01 mai 2020 11:48
Famoizam-po: Nentin'ilay ramatoa namono tena niaraka taminy ny zanany roa mianadahy
Vehivavy iray, 23 taona niaraka tamin’ny zanany roa mianadahy, 3 taona sy 7 volana ny vavy, ary 2 taona ny lahikely, no hita faty teo amin’ny Dobombazaha, Fokontany Antsahanatoby, Kaominina Ambohimiadana, Distrika Andramasina.
Nisy hafatra nisoratra teo amin’ny vato milaza fa « mafy loatra ny mahazo anay », izay nanaovan’ny olona tombana fa famonoan-tena noho ny famoizam-po no anton’izao.
Nanokatra ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana, ka aorian’izay no ahafantarana ny antony sy ny ao ambadik’izao loza izao.
vendredi, 01 mai 2020 11:18
Ambanja: Tazomina am-ponja ny 4 tamin’ireo 25 voarohirohy tamin’ny famonoana Polisy
Nanodidina ny tamin’ny 11ora alina, omaly alakamisy 30 aprily 2020 vao vita ny fanolorana teo anivon’ny Fampanoavana, eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Ambanja, ireo 25 lahy voarohirohy tamin’ny famonoana ka nahafaty Polisy iray, AP2 Léonard Jean Patrick, Polisy miasa ao amin’ny Kaomisaria Ambanja, sy nandratra roa hafa tany Antsifitry Kaominina Benavony, Distrika Ambanja ny sabotsy 25 aprily 2020 lasa teo.
vendredi, 01 mai 2020 11:12
Ikalamavony: Dahalo roa maty, roa azo sambobelona, basy telo tratra
Andian’olona valo lahy mitonona ho « Lambamena », mitondra fitaovam-piadiana toy ny basy sy zava-maranitra, niakatra tanàna tao Amboasary Kaominina Ambatomainty, Distrika Ikalamavony, ny alatsinainy 27 aprily 2020 teo. Milaza hikaroka dahalo, miafina ao amin’io tanàna io izy ireo, raha tsy izany dia manefa 4 tapitrisa Ariary ny iray tanàna.
Nisy nampandre haingana ny Zandary manoloana ny zava-misy. Tsy niandry ela dia tonga ireto nantsoina. Vao nahita ireto Zandary avy ireo andian’olona mitam-piadiana ireto dia nanapoaka basy. Raikitra ny fifandonana. Maty voatifitra ny roa tamin’izy valo, azo sambobelona ny roa. Basy telo ihany koa tratra. Tsy nisy nahiana ireo mpitandro ny filaminana.
Dahalo diso fantatry ny Fokonolona avy ao amin’ny Kaominina Ambatomainty, Distrika Ikalamavony ireto tratra ireto.
vendredi, 01 mai 2020 10:58
Chine: Mpanao gazety iray voaheloka higadra 15 taona an-tranomaizina fa naniratsira ny antoko Kaominista
Nidoboka am-ponja i Chen Jieren, « blogueur », mpanao gazety tao amin’ny «Quotidien du Peuple». Fanalam-baraka sy faniratsirana ny antoko Kaominista eo amin’ny fitondrana sy ny governemanta no voalaza fa vesaka nanamelohana azy, 15 taona an-tranomaizina, sazy mihatra, nandritra ny fitsarana azy omaly tao Guiyang, faritra Hunan.